musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Cyprus Airways inotangisa nzira nyowani yePrague-Larnaca
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Cyprus Kupwanya Nhau • Czechia Breaking News • nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo
Cyprus Airways yekutanga ndege kubva kuLarnaca kuenda kuPrague yaitika nhasi. Ndege yakabva kuLarnaca mushure me11: 00 mangwanani ndokumhara muPrague na13: 40. Prague Airport yakagamuchira ndege dzeCyprus Airways pamwe nesaruti yemvura yekoneti uye yakatambira vaenzi vepamutemo nevatakuri paGedhi, nekucheka ribhoni kwendege.
Cyprus Airways ichabatanidza Larnaca nePrague, kutanga Chishanu choga choga uye kubva musi wa2 Chikunguru Muvhuro wega wega neChishanu.
Nezve Cyprus Airways
Muna Chikunguru 2016, Charlie Airlines Ltd, kambani yakanyoreswa kuCyprus, yakahwina mukwikwidzi wethenda wekodzero yekushandisa chiratidzo chiziviso cheCyprus Airways kwemakore gumi. Iyo kambani yakatanga nendege munaJune 2017 kuenda kunzvimbo ina.
Cyprus Airways iri paLarnaca International Airport. Ndege dzese dzeCyprus Airways dzinoshanda nendege dzazvino dzeAirbus A319 dzinokwana zvigaro zve144 zveEconomy Class.
Chinangwa chekambani-chenguva refu ndechekupa mukuwedzera kwekushanya muCyprus, panguva imwe chete ichiwedzera kuwanda kwevafambi vemuno.
Prague ndiro guta guru uye rakakura kuguta muCzech Republic, iro regumi nemana pakukura guta muEuropean Union uye zvakare nhoroondo yenhoroondo yeBohemia. Riri kuchamhembe kwakadziva kumadokero kwenyika parwizi rweVltava, guta iri rinogara vanhu vangangosvika mamirioni e14, nepo nzvimbo yacho huru yemadhorobha ichifungidzirwa kuva nevanhu vanosvika mamirioni 1.3. Guta rine tembiricha yakadzikama, ine mwaka unodziya uye kutonhora kwechando.
Prague yanga iri yezvematongerwo enyika, yetsika uye hupfumi nzvimbo yepakati peEurope izere nenhoroondo yakapfuma. Yakavambwa panguva yeRomanesque uye ichikura neGothic, Renaissance uye Baroque eras, Prague yaive guta guru rehumambo hweBohemia uye imba huru yekugara kweVazhinji veVatsvene veRoma maMambo, kunyanya Charles IV (r. 1346-1378). Raive rakakosha guta kuMambo weHabsburg uye neAustro-Hungary Humambo. Guta rakaita mabasa akakura muBohemian nePurotesitendi Shanduko, Hondo Yemakore Makumi Matatu uye munhoroondo yezana ramakore rechi20 seguta guru reCzechoslovakia, panguva yeWorld War uye neyepashure pehondo nguva yechiKomonisiti.